Naya Bikalpa | सिङ्गो संसारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको बेलामा मेरो नहुने कुरै भएन नी - Naya Bikalpa सिङ्गो संसारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको बेलामा मेरो नहुने कुरै भएन नी - Naya Bikalpa
सिङ्गो संसारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको बेलामा मेरो नहुने कुरै भएन नी
प्रकाशित मिती: २०७५ असार ४, १०: ११: १२
विश्व प्रकाश शर्मा –प्रवक्ता,नेपाली कांग्रेस
नेपाली पत्रकारितामा सँधै राजनीतिक वहस, छलफल तथा घोचपेच चलिरहने गर्दछ । सबै राजनीतिक दलका नेताहरु अन्य विषयमा प्रवेश गर्न त्यति रुचाउँदैनन् । देशभित्र सामाजिक, आर्थिक लगायत विभिन्न खाले सामाजिक क्रियाकलापबारे त्यति धेरै चाख राखेको पाइदैन ।
तर यसपटक हामीले विश्व चर्चित विश्वकप फुटबलको बारेमा राजनीतिक व्यक्तित्व स्पष्ट वक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मासँग विश्वकपकै बारेमा नयाँ विकल्प साप्ताहिकको तर्फबाट पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशं ः
नेपाली समय अनुसार जेठ ३१ गतेदेखि शुरु भएको विश्वकप फुटबलतिर तपाई राजनीतिक व्यक्तिको ध्यान गयो कि गएन ?
निश्चय नै त्यो बेलामा विश्वकप फुटबल सुरु हुँदा मेरो ध्यान त्यतै लालायित भयो । म राजनीतिक व्यक्ति भएर पनि राजनीतिक कुरोले मात्रै मलाई पुग्दैन । त्यसैले पनि सिङ्गो संसारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको बेलामा मेरो नहुने कुरै भएन नी । फेरी त्यो मेरो बढी रुचिको विषय पनि हो । उद्घाटन समारोह खेल पनि हेरियो । सम्भव भएसम्म निरन्तर रुपमा अरु खेलहरु पनि हेर्नेछु ।
तपाई राजनीतिक व्यक्ति भएर पनि सबै खेल हेर्नको लागि समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ?
किन नसक्नु सक्छु नि । प्रत्येक दिनमा अलग अलग समयहरुमा अलग अलग सन्दर्भहरु हुन्छन् । मान्छेको जीवनमा पनि फरक फरक दायित्व र भूमिकाहरु हुन्छन् । त्यसैगरी रुचिको विषय पनि फरक हुन्छन्, त्यसकारण राजनीतिक मान्छे हुनुको अर्थ एकदमै समयलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने त बनाउनै हुँदैन । त्यो हिसाबले समयलाई व्यवस्थापन गर्ने हो ।
आफ््नो पार्टीको पार्टीगत कार्यहरु एक किसिमले अगाडी बढीरहेका हुन्छन् भने अर्को पाटोमा पारिवारिक कर्मको लागि पनि समय छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । समय व्यवस्थापन गरेर साथीभाइहरु तथा परिवारका व्यक्तिहरुसँग बसेर मस्तसँग विश्वकप खेल हेर्दै आनन्द लिने हो ।
उसोभए विश्वकप भइरहँदा तपाईलाई मनपर्ने राष्ट्र तथा खेलाडी कुन हो ?
विश्वकप फुटबल खेलको सन्दर्भमा मात्र भन्नुपर्दा रोनाल्डो, मेस्सी र नेमारको नाम लिनुपर्ने हुन्छ । तर मैले समर्थन गरेको फुटबल टिम भनेको चाँही अर्जेन्टिना नै हो ।
तपाईलाई अर्जेन्टिनाले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता केको लागि हो ?
एकदमै जित्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि आफुलाई मनले यो देशले जितोस भन्न् चाहना हुन्छ नि । त्यसैले राजनीतिमा पनि हुन्छ नी, सामान्यतया लविङ्ग गर्ने वा चुनावमा प्रचार गर्ने भन्ने जस्तो कुरा चाँही स्वार्थ हुँदैन । तर आफुले रुचि राख्ने टिम चाँही पाखा परेको छ कि भन्ने त लाग्छ नि । त्यसैले यसपाली बलियो टिमको रुपमा ब्राजिल, जर्मनी, स्पेन आदी टिमहरु पर्छन भन्ने लाग्छ ।
तुलनात्मक रुपले अर्जेन्टिना पनि कमजोर त छैन तर अर्जेन्टिनाको मुख्य गोलरक्षकको घुँडाको चोटको कारणले गर्दा उनि नखेलेर दोस्रो विकल्पमा खेलाडी खेल्दै छन् । त्यस हिसाबले गर्दा त्यहाँ अर्जेन्टिना तुलनात्मक रुपले कमजोर हुन सक्छ भन्ने कुरा पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आयोजक राष्ट्र रुस उद्घाटन सत्रको पहिलो खेलमै सानदारसँग जित हात पा¥यो नि, तपाईलाई के लाग्छ आयोजनक राष्ट्र जित्नै पथ्र्यो ?
विश्वकप खेल भइरहँदा आयोजक राष्ट्र पहिलो चरणमा नै बाहिरियो भने अझ भन्नुपर्दा उद्घाटन खेलमा नै पराजित भयो भने त्यो राष्ट्रमा नमजा हुन्छ । त्यसैले गर्दा रसियाको जितलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । ५–० गोलको अन्तर आउँदै गर्दाखेरी साउदी अरबका खेलाडीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमै कमजोर थिए की भन्ने देखिन आयो । रुसका खेलाडीले बलिङलाई कतिपय प्रहारहरु साउदी अरबका खेलाडीहरुले प्रहार गरे । तर त्यसलाई निर्णायक बनउन सक्ने क्षमता साउदी अरबका खेलाडीमा देखिएन । यद्यपी रसियाको खेल पनि एकदमै उत्कृष्ट भनेर त नभनौं तर कमजोर माथि अलिकति बलियो तरिकाले हाबी भएको अवस्थाको रुपमा लिनुपर्छ ।
तपाई राजनीतिक खेलाडी पनि भएको हुँदा खेलकुदमा पनि चाख राख्ने खेलाडी तर हाम्रो देशको खेलको विकास चाँँही किन विस्तार नभएको होला ?
अवश्य पनि देशमा खेलकुदको विकास हुनुपर्छ । त्यसमा दुईमत हुन सक्दैन । त्यसैले फुटबलबाट के लाभ लिने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दै गर्दा तपाईले भनेजस्तै हाम्रो देशको खेलको विकास हामीले गर्न सकेनौं की ? हामी खेलकुदको विषयमा कति गम्भिर भयौ ? भन्ने लाग्छ । फुटबललाई बुझ्दै गर्दाखेरी छालाको बलभित्र हावा भरिएको हुन्छ र खेलाडीका खुट्टाहरुले ९० मिनेटसम्म खेल्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । फुटबल छालाको बलको रुपमा होइन की फुटबल खेल्दै गरेको खेलाडीको घरको चुलाचौकाको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
क्रिकेट बुझ्दै गर्दा वास्तवमा व्याट वा बलको रुपमा बुझ्ने भन्ने भन्दापनि त्यो क्रिकेट जे हो, त्यो खेलाडी जुन हो उसको छोरीको फिस अथवा आमाको उपचारको खर्च बुझ्नुपर्छ । त्यस हिसाबले राष्ट्रले गर्ने कोर्सहरु, क्याम्पहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यस्ता कोर्सहरु चलाउने प्रोफेशनल खेलाडीलाई समर्थन गर्दै विभिन्न कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यस्तो खालको प्राथमिकता दिँदाखेरी स्कुल, कलेजबाटै विद्यार्थीहरुलाई त्यो खालको अभ्यास गराउने कुरामा गम्भिर हुनपर्छ । मलाई लाग्छ विश्वकप जस्ता फुटबल र क्रिकेटका खेलहरु हुँदै गर्दा हामीले गर्ने छलफल र चिन्तनको विषय यो पनि हो । तर यो समयमा अहिले फरक फरक हिसाबले पनि संसारमा यसबाट लाभ लिने घटनाहरु भइरहेका छन् । हामीले नि त्यसबाट लाभान्वित हुन जान्नुपर्छ ।
त्यसोभए तपाईले भनेजस्तै नेपालले कहिले सम्ममा विश्वकप फुटबलमा भाग लिने अवसर पाउँला त ?
मैले केही दिन अगाडी ट्विट गर्दा पनि के उल्लेख गरेको थिए भने चन्द्र र सुर्य अंकित झण्डा भएको आफ््नै देशको जर्सी लगाएर आफ्नै देशको फुटबल टिमलाई सपोर्ट गर्दै फुटबल हेर्ने चाहना हरेक नेपालीहरुमा हुनुपर्छ । नेपाल देशको समृद्धिको उचाइ भन्दै गर्दाखेरी प्रगतिको उचाइ भन्दै गर्दा बाटोघाटो, बिजुलीको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो देशले धर्मकर्म, संस्कार संस्कृति, भातृत्व प्रेम, खेल, कला, साहित्य र संगित यो कुरामा पनि प्रगति गरेर जानुपर्छ भन्ने हामीले सोंचाई राख्नै पर्छ । त्यसैले त्यो हाम्रो एउटा सपना हो ।
जसलाई पुरा गर्न नसकिएला भन्ने होइन । यो सपना पुरा गर्नको लागि पूर्वाधार, साधन र स्रोत पनि चाहिन्छ, सम्पन्न राष्ट्रको नागरिक पनि हामी हुन सक्नुपर्छ । हामीले व्यवसायिकतालाई बढी जोड दिएर जान सक्यौं भने त्यो हुन सक्छ । यही प्रसंगमा एउटा व्यवसायिकताको सन्दर्भमा म स्मरण गर्न चाहन्छु दुइ चरण अगाडीका विश्वकप फुटबलमा इटलीका प्रधानमन्त्री रोमानो प्रोदीले आफ्नो फुटबलको टिम कोच माल्दिनिलाई फोन गरेर उनी भन्छन् यो अयोग्य खेलाडीलाई मैदानमा खेलाउनु है भनेर भन्छन् । कोंचले ठिकै छ भन्छन् । भोलीपल्टको खेलमा उनले खेलाउँदैनन् नखेलाई सकेपछि प्रधानमन्त्री रोमानो प्रोदीले माल्दिनीलाई फोन गर्छन । तपाईलाई मैले फलानो खेलाडी खेलाउनु भनेको थिए किन खेलाउनु भएन ? त्यो बेलामा माल्दिनीले जुन जवाफ दिन्छन्, त्यो मिडियामा आएको थियो । बडा गजबको जवाफ छ, माल्दिनीले भन्नुभयो – सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईलाई देश कसरी चलाउने मलाई भन्दा बढी आउँछ, तर फुटबलको मैदानमा कुन खेलाडीलाई खेलाउने कसरी खेलाउने की नखेलाउने भन्ने कुरो तपाईलाई भन्दा बढी मलाई आउँछ ।
तपाई देश चलाउने कुरामा लाग्नुस् । फुटबलको मैदानको कुरा मलाई छोडिदिनुस् । त्यो प्रोफेशनल जुन अभिव्यक्ति होकी एउटा चाँही दरो भएर बोल्ने व्यक्ति हो । तपाई हामी पनि जान्दछौं की हाम्रो फुटबलको प्रगतिको निमित कांग्रेस, एमालेको कुनै पनि खेलमन्त्री अथवा कुनै निश्चित राजनीतिज्ञले भन्दा बढी जान्दछन् ! उता अमेरिकामा बसेर फुटबल टिमलाई कोच गरिहेका एउटा नेपाली युवक छन् प्रदिप हुमागाई यी कुरा जानेका हुन्छन् ? अथवा कर्मा छिरिङ शेर्पा जो एन्फाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले जान्नुहुन्छ । व्यवसायिक रुपमा मैदानमा रहेकाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कर्म राज्यले गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्छ । राजनीति हस्तक्षेप मुक्त बनाएर लिएर जानुपर्छ । लगानी गर्ने र बजार प्रबद्र्धनमा सघाउने यो खालको कर्म ग¥यौ भने हाम्रो पनि खेलाडीहरु व्यवसायिक रुपमा आउन सक्छन्, हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
अब सन्दर्भ अलिकति परिवर्ततन गरु कि, यही ५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री के.पी ओली शर्माको चीन भ्रमणको एजेण्डा पनि आइसकेको छ, यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ ? बताइदिनुस् ।
प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भ अचानक आउँदै गर्दा मैले यस बारेमा भन्नुपर्दा हामीले दक्षिणी र उत्तरी दुवै मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो राजनीतिक मनोविज्ञान, हाम्रो विश्वासको जगमा उभिएर हामीले ड्राइभ गर्ने हो । तर हामी दुईवटै देशको अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौं, त्यसैले नेपालमा लगानी गराउने सन्दर्भमा चाँही एउटा राष्ट्रिय सम्मान, स्वाधिनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवसायिक रुपमा अगाडी बढ्ने भन्ने नै हो । त्यो हिसाबले चीनको भ्रमणलाई शुभकामना दिने र प्रधानमन्त्रीले सतकर्ता पूर्वक काम गर्ने र त्यसमा लाभ लिने कर्म गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्त्यमा लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भन्ने मूल मन्त्र लिएर अगाडी बढेको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिक पत्रिका २४ वर्ष पुगेर २५ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा २५ वर्षको शुभारम्भको अवसरमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा नयाँ विकल्प साप्ताहिकले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएको छ ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा कलम चलाउँदै आएको यो साप्ताहिकले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको रक्षार्थ अझ सशक्त र निडर भएर अगाडी बढ्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै भविष्यसम्म नयाँ विकल्प साप्ताहिकलाई हाम्रो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत सहयोग सद्भाव रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । २४ वर्षको दौरानमा नयाँ विकल्प साप्ताहिकले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा गरेको योगदानको सबैतिरबाट उच्च मूल्यांकन हुने अपेक्षा राखेको छु ।
२०७५ असार ४, १०: ११: १२